Sweden oo Lacag dheeri ah ku caawineysa Qeybta Daryeelka Caafimaadka Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka SwedenSweden oo Lacag dheeri ah ku caawineysa Qeybta Daryeelka Caafimaadka
Sweden oo Lacag dheeri ah ku caawineysa Qeybta Daryeelka Caafimaadka
April 6, 2021 Wararka Sweden, Wararka Maanta Somaliska 0
Foto: Jonas Ekstromer / TT
Dowlada ayaa dooneysa inay daryeelka caafimaad siiso todobo bilyan oo koroon oo dheeri ah si loogu qabtay adeega Corona Virus iyo dadka u baahan caawinta.
– Waxaan dooneynaa inaan lacag badan siino talaalada ka hortaga viruska corona iyo shaqada ka hortaga cudurka. Taasi waa waxa ay tiri wasiir Magdalena Andersson.
Dawladdu waxay kaloo dooneysaa in lacagta lagu sameeyo howlo iyo waxyaabo kale oo ay ahayd in la sugo inta lagu guda jiro xaaladda corona ay dib u bilowdaan
Dawladdu waxay rabtaa dadku inay kusii socdaan inay guryahooda joogaan oo ay 14 maalmood iyagoon haysan warqad dhakhtar.
Dowladda ayaa sheegtay inay muhiim tahay in la yareeyo faafitaanka cudurka.
15-ka Abriil, dowladdu waxay sheegi doontaa sida ay u doonayaan inay u isticmaalaan lacagta Sweden. Waxay ku sameeyaan tan soo-jeedin loo yaqaan miisaaniyadda gu’ga. Miisaaniyadda guga waxaa ku jiri doona soo jeedinta lacag badan oo loogu talagalay daryeelka caafimaadka